ဆေးပညာစာမေးပွဲ အောင်မလားနှင့် KP ပညာ-၂ – အခါပေး ဗေဒင်
ဆေးပညာစာမေးပွဲ အောင်မလားနှင့် KP ပညာ-၂
akhapaybaydin6Dec 2013 Uncategorized
​ ဆေးပညာစာ​မေးပွဲ ​အောင်​မ​အောင်​ ​မေးလာလို့ တွက်​ထားတာပါ။ ​လေ့လာကြည့်​ကြပါစို့။
Name: Dr. AAM
Date: 7.11.2013(Thu) Time: 22.03.31(M.S.T)
Given number: 77 Place: Yangon
Query: Is there any chance that I can pass it or not?
အထက်​ပါ Astro data များကို KP ဟူးရားဇာတာဖွဲ့လျှင်​ ​အောက်​ပါဇာတာကို ရရှိမည်​-
​မေးသည့်​​မေးခွန်း ရိုးသားမှု ရှိမရှိကို စိတ်​နှင့်​ဆိုင်​​သော ၂-င်္လာဂြိုဟ်​မှ ကြည့်​ရ​ပေမည်​။ အကယ်​၍ ​၂-င်္လာဂြိုဟ်​သည်​ ​မေးသည့်​​မေးခွန်း နှင့်​ ဆက်​စပ်​မှသာ ​မေးသူသည်​ ရိုးသားပြီး ​ရှေ့ဆက်​​ဟောရ​ပေမည်​။ Otherwise not.
အထက်​ပါ ဇာတာတွင်​ ၂​-င်္လာဂြိုဟ်​သည်​ ၆-ကြာဂြိုဟ်​ပိုင်​ နက္ခတ်​ကိုစီးထား၏​။ ၆-ကြာဂြိုဟ်​သည်​ ၄-တန့်​(ပညာ​ရေး) ဘာဝနှင့်​ ၁၁-တန့်​(ဆန္ဒပြည့်​)ဘာဝ ပိုင်​ရှင်​ဖြစ်၏​။ ထို့​ကြောင့်​ ဇာတာရှင်​သည်​ ရိုးသားပြီး ​ရှေ့ဆက်​​ဟောရ​ပေမည်​။
Ascendent Sub-lord Signifies One’s Effort
အထက်​ပါဇာတာတွင်​ ဇာတာရှင်​ဧ။်​ ကြိုးစားအားထုတ်​မှုနှင့်​ဆိုင်​​သော ၁-တန့်​ Sub-lord ၆-ကြာဂြိုဟ်​သည်​ ၉-တန့်​(အဆင့်​မြင့်​ပညာ​ရေး) ဘာဝတွင်​ ရပ်​​နေ​သော ၉-ကိတ်​ဂြိုဟ်​ပိုင်​ နက္ခတ်​ကိုစီးထားပြီး ၄-တန့်​(ပညာရး)ဘာဝနှင့်​ ၁၁-တန့်​(ဆန္ဒပြည့်​)ဘာဝပိုင်​ရှင်​ဖြစ်​၏​။ ထို့​ကြောင့်​ ဇာတာရှင်​ဧ။်​ ကြိုးစားအားထုတ်​မှုဖြင့်​ စာ​မေးပွဲကို အဆင့်​မြင့်​မြင့်​ ​အောင်​မြင်​မည်​ကို ​ဖော်​ပြ​နေ၏​။
စာ​မေးပွဲနှင့်​ ပါတ်​သက်​လျှင်​ ၄-တန့်​ Sub-lord ကို ကြည့်​ရမည်​။ အကယ်​၍ ၄-တန့်​ Sub-lord သည်​ ၄-တန့်​(ပညာ​ရေး)၊ ၉-တန့်​(အဆင့် မြင့်​ပညာ​ရေး)၊ ၁၁-တန့်​(ဆန္ဒပြည့်​) ဘာဝတို့ဧ။်​ ဇာတ်​​ဆောင်​ဖြစ်​လျှင်​ စာ​မေးပွဲ​အောင်​မည်​။
အထက်​ပါဇာတာတွင်​ ၄-တန့်​ Sub-lord သည်​ ၂-င်္လာဂြိုဟ်​ဖြစ်​သည်​။ ၂​-င်္လာဂြိုဟ်​သည်​ ၆-ကြာဂြိုဟ်​ပိုင်​ နက္ခတ်​ကိုစီးထား၏​။ ၆-ကြာဂြိုဟ်​သည်​ ၄-တန့်​(ပညာ​ရေး) ဘာဝနှင့်​ ၁၁-တန့် (ဆန္ဒပြည့်​)ဘာဝတို့ဧ။်​ ပိုင်​ရှင်​ဖြစ်​၏​။
Ruling Planets (စိုးမိုးဂြိုဟ်​များ)
လဂ်​သခင်​ – ၄-ဟူး
လဂ်​စီးနက္ခတ်​ – ၅-​တေး
​စန်းသခင်​ – ၅-​တေး
စန်းစီးနက္ခတ်​ – ၆-ကြာ
​နေ့သခင်​ – ၅-​တေး
Guibarga Theory (ဂူဗာဂါးသီအိုရီ)
ဆရာကြီး K.S.K ကွယ်​လွန်​ပြီး​နောက်​ပိုင်းမှ ​ပေါ်​ပေါက်​လာခဲ့​သော သီအိုရီဖြစ်​သည်​။ အကယ်​၍ ၁-တန့်​ Sub-lord သည်​ စိုးမိုးဂြိုဟ်​များထဲမှ လဂ်​စီးနက္ခတ်​ (သို့) စန်းစီးနက္ခတ်​နှင့်​ တိုက်​ဆိုင်​တူညီလျှင်​ ​မေးသည့်​ကိစ္စ ​အောင်​မြင်​မည်​။ အထက်​ပါဇာတာတွင်​ ၁-တန့်​ Sub-lord သည်​ ၆-ကြာဂြိုဟ်​ဖြစ်​၍ စိုးမိုးဂြိုဟ်​ဧ။်​ စန်းစီးနက္ခတ်​နှင့်​ တိုက်​ဆိုင်​တူညီ​နေသည်​။
(Notes: ဂူဗာဂါးသီအိုရီနှင့်​ မတိုက်​ဆိုင်​လျှင်​လည်း +ve Answer ဖြစ်​နိုင်​ပါသည်​။ တိုက်​ဆိုင်​ခဲ့လျှင်​​တော့ အပိုင်​​ပြော၍ ရပါသည်​။)
​သေချာ​ပေါက်​ စာ​မေးပွဲ​အောင်​မည်​။ No doubt.
Results are out just now
I pass with higher marks
Really appreciate your prediction
Previous ဘာစီးပွားရေးလုပ်ရမလဲလို့ တစ်မေးတည်း မေးနေသူများအတွက်-၂
Next Football Final Match (Thai vs Indo)